एजेन्सी । विश्वभरका मानिसहरुले फोर जी स्पीडको सुविधा पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न पाइसकेका छैनन, तर दुनियाँमा फाइभ जी ल्याउने तयारी सुरु भइसकेको छ । खबरका अनुसार छिट्टै नै दुनियाँको पहिलो..
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको आसन्न महान चाड विजया दशमीको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरुमा छुट उपलब्ध गराएको छ । रिचार्जमा बोनस : आगामी असोज २९ देखि..
अब साझा यातायातको लामो दूरीको टिकट अनलाइनबाटै
काठमाडौं । साझा यातायात र अनलाइनबाट बस टिकट काट्ने सुविधा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमबीच अनलाइन टिकटिङ सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै अबदेखि यात्रुहरूले साझा यातायातका टिकट अनलाइनबाटै काट्न सक्नेछन्..
दशैंको अवसरमा नेपाल टेलिकमले यस्तो छुट दिंदैछ
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको आसन्न महान चाड विजया दशमीको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरुमा छुट उपलब्ध गराएको छ । यस वर्ष के कुन सेवामा कस्तो..
दशैंमा मोबाइल किन्दै हुनु हुन्छ? अब ताम्राकार कम्प्लेक्समा ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । मोबाइल पसलहरु रहेको ताम्राकार कम्प्लेक्सले दशैं मोबाइल मेला आयोजना गरेको छ। सोमबारदखि सुरु भएको उक्त मेलामा उपभोक्ताले छुटका अवसर पाउने छन्। ताम्राकार कम्प्लेक्सभित्र यस अवधिमा कुनैपनि मोबाइल खरिदमा ग्राहकहरुले..
काठमाडौं । मोबाइल र सामाजिक सन्जालको प्रयोगमा नेपालीले भारतीयलाई जितेका छन् । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा पछिल्लो सर्वेक्षणले भारतीय भन्दा नेपाली जनता प्रबिधिको प्रयोगमा अगाडि देखिएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएका..
इ-सेवाले दशैको अबसरमा आफ्ना प्रयोगकर्तालाई वम्पर उपहार दिने
काठमाडौं। नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे कम्पनी इसेवा फोन पेले दशैंलार्इ लक्षित गर्दै ‘दशैँ धमाका’उपहार योजना ल्याएको छ। असोज २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो योजनामा बम्पर, प्रथम, दोस्रो, तेस्रो , विशेष र..
एनसेलद्वारा ‘रिचार्ज एण्ड विन’ अफर अन्र्तगत नगद पुरस्कार वितरण
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको अवसरमा संचालन गरिरहेको आकर्षक ‘रिचार्ज एण्ड विन’ अफर अन्तर्गत बिहीबार तेस्रो हप्ताका विजेताहरुलाई नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । ‘रिचार्ज एण्ड विन’..
सुजुकीको बाइकमा ८ हजार र स्कुटरमा १० हजार रुपैयाँ छुट
काठमाडौं। नेपालको लागि बिशाल ग्रुप अन्तर्गतको भीजी अटोमोबाइलस प्रालिबाट बिक्री बितरण हुदै आएको सुजुकी बाइक तथा स्कूटरमा दसैं स्किम आएको छ। नेपाल भरीका सुजुकी शोरुमबाट खरीद गर्दा बाइकमा ८ हजार छुट..
एनसेलको माई फाइभ योजनासहित संविधान दिवसको अवसरमा यस्तो नयाँ अफर
काठमाडौं । एनसेल प्रालिले संविधान दिवसको अवसरमा नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत ग्राहकले आकर्षक छुट सहितको दरमा माई फाइभ र आई फ्लिक्स सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । एनसेलका ग्राहकले मंगलबारबाट..
भोलीदेखि नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई यस्ता छन् अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले असोज १ गतेदेखि इन्ट्रानेट लिज सेवाको महशुल दर परिमार्जन गर्नुका साथै वाइम्याक्स सेवामा प्रमोसनल अफर लागू गर्ने भएको छ । कर्पोरेट ग्राहकहरुले नेपाल टेलिकमको आईपी नेटवर्क प्रयोग..
अब आईफोनमा पनि डबल सिम, आईफोन एक्स एस सार्वजनिक भएसँगै सेभेन र एटको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । एप्पलले पहिलो पटक दुईवटा सिमकार्ड लाग्ने आईफोन सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार राति सनफ्रानसिस्कोमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा एप्पलले आईफोन एक्स एस, एक्स एस म्याक्स र एक्स आर मोडल..
सामसङ ग्यालेक्सी जे८ नेपाली बजारमा
काठमाडौं । सामसङले हालै नेपाली बजारमा ग्यालेक्सी जे८ स्मार्टफोन प्रस्तुत गरेको छ । जे८ सामसङको इन्फिनिटि सिरिज अन्तर्गतको एक हिस्सा हो । जसमा ६ इन्चको सुपर इन्फिनिटि डिसप्ले तथा डुयल..
हुवावेको नोभा थ्री र नोभा थ्री आई सार्वजनिक, कति छ मूल्य ?
काठमाडौं । चिनियाँ फोन उत्पादक कम्पनी हुवावेले नोभा सिरिजअन्तर्गतका नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। फोन सार्वजनिक गर्ने क्रममा हुवावे नेपालका सिइओ डेनि ड्या ले यी..
१० हजार बचत गराउने एलजीको स्मार्ट इन्भर्टर प्रविधिमा आधारित फ्रिज
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो डाइरेक्ट कुल रेफ्रिजेरेटरले १० हजार ३ सय २० रुपैयाँसम्म बचत गराउने कम्पनीले जनाएको छ । एलजीको स्मार्ट इन्भर्टर प्रविधिमा आधारित यस फ्रिजले ऊर्जा र पैसा दुबैको..
एचटिसीका दुई नयाँ फोन बजारमा
काठमाडौं । गोयन्का ग्रुप अन्तर्गतको गोयन्का इन्फोटेकले नेपाली बजारमा एचटिसी ब्राण्डका दुई नयाँ फोनहरु ल्याएको छ। ‘डिजायर १२’ र ‘डिजायर १२ प्लस’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको हो। एचटिसी डिजायर १२ मा..
हुवाईको नोभा सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू अब नेपाली बजारमा
काठमाण्डौ । चिनियाँ फोन उत्पादक कम्पनी हुवाईले नोभा सिरिजअन्तर्गतका पछिल्लो स्मार्टफोनहरू नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। मानव जीवनलाई पूर्ण सहज बनाउने गरी बनाइएको आकर्षक डिजाइनका..
१ रुपैयाँमा नै स्मार्टफोन किन्न पाईने, थप १ वर्षको वारेन्टी उपलब्ध
काठमाडौं । १ रूपैयाँमा नै मोबाइल ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी ईजी मोबाइल केयर प्रालिले मोबाइल खरिदकर्ताहरुका लागि फेरी नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा रहेको कम्पनीले..
नेपाल टेलिकमको आयो मोवाईल एप, टेलिकमका प्याकेज किन्न र बिल तिर्न सजिलो
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले आफ्नै मोबाइल एप 'नेपाल टेलिकम' संचालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले जीएसएम, सीडीएमए, पिएसटीएन र एडीएसएल लगायतका सेवासम्बन्धी जानकारी दिन आफ्नै मोवाइल एप संचालनमा ल्याएको जनाएको छ। उक्त मोवाइल एपमा..
बजेटपछि पल्सरसहित बजाजका बाइकहरुको मूल्य कति पुग्यो ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत मोटरसाइकलको आयातमा लाग्ने करमा वृद्धि गरेपछि कम्पनीहरुले नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । तर, स्टकमा रहेका बाबइकको मूल्य भने पुरानै सूचीअनुसार नै बिक्री हुने जानकारी..
अब इन्टरनेट १३% महङ्गो:ग्राहकलाई ढाड सेकाउन खोजेको व्यवसायीको आरोप
काठमाडौँ । सरकारले दुरसञ्चार सेवा अन्र्तगत इन्टरनेटमा पनि थप १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउने भएको छ । योसँगै इन्टरनेटसेवामा पनि ग्राहकले तिर्ने दस्तुर बढ्ने भएको छ । सरकारले बजेट मार्फत गाउँ—गाउँमा इन्टरनेट..
भोलीबाट नेपाल टेलिकमको १८ रुपैयाँमा ‘अनलिमिटेड प्याक’ र मिस्ड एलर्ट सेवा शुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मिस्ड कल एलर्ट सेवा फेरि सञ्चालन गर्ने भएको छ । गणतन्त्र दिवस २०७५ को अवसरमा कम्पनीले भोलि (जेठ १५ गते) देखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । जीएसएम..
नेपाल टेलिकमको डाटा प्रयोगकर्ता १ करोड १ लाख नाघे
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता एक करोड एक लाख ५४ हजार पुगेका छन् । कम्पनीले हालै प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जिएसएम डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता ९७ लाख ९५ हजार १००,..
चिनियाँ ई-कमर्स अलिबाबा नेपालमा पनि विस्तार
काठमाडौं । चीनको ठूलो अनलाइन व्यापार कम्पनी अलिबाबाको सेवा नेपालमा पनि विस्तार हुने भएको छ । अलिबाबाले रकेट इन्टरनेटले सञ्चालन गरेको दराज ग्रुपको सबै सेयर किनेपछि दराज मार्फत अलिबाबाले नेपालसहित दक्षिण..
नयाँ वर्षमा टेलिकमले ल्यायो चार विशेष अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा विशेष अफर ल्याएको छ । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष अफर २०७५ ल्याएको हो । उक्त अफर २०७५ वैशाख ०१ देखि लागु..
एसईई परीक्षार्थीलाई रु १ मा एनसेलको ‘पहिलो सिम’ योजना
काठमाडौं । एनसेलले २०७४ सालको एसईईमा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुका लागि विषेश अफर ‘पहिलो सिम’ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत परीक्षार्थीले मात्र रु १ मा एनसेलको प्रिपेड सिमको खरिदसँगै सिमको पहिलो रिचार्जमा..
आजदेखि नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोवाइलमा ४० रुपैयाँ ऋण दिने
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले आजदेखि ४० रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । नमस्ते क्रेडिट नामक योजना सुरु गर्दै टेलिकमले प्रिपेड फोनका ग्राहकले फोनमा कुरा गर्दागर्दै ब्यालेन्स..
पेट्रोलियम पदार्थबाट भन्दा बिजुलीबाट गाडी चलाउँदा चार रुपैयाँ सस्तो
काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनको सञ्चालन खर्च प्रतिकिलोमिटर चार रुपैयाँ सस्तो पर्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका बसको..
प्रजातन्त्र दिवसमा टेलिकमले ल्यायो भारी छुट, यस्तो छ ‘फ्रिडम प्याक’ अफर
काठमाडौं । फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि ‘फ्रिडम प्याक’ उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीका जीएसएम र सीडीएमए मोबाइलका ग्राहकहरुले सो प्याकको उपयोग एक घण्टासम्म..
माइक्रोम्याक्सका स्मार्टफोन किन्न सुरुमा पैसा नचाहिने, किस्ताबन्दी तिरे पुग्ने
काठमाडौं । माइक्रोम्याक्सको क्यानभास इन्फिनीटी फोन सुरुमा एक रुपैयाँ पनि नबुझाई किस्ताबन्दीमा किन्न पाइने भएको छ। नेपालका लागि आधिकारीक बिक्रेता पशुपति ट्रेड लिकसँगको सहकार्यमा सुन्धारास्थित इजी मोबाइल केयरले माइक्रोम्याक्स क्यानभास इन्फिनीटी..
Results 402: You are at page6of 14